Iran: Mpitoraka blaogy kely taona indrindra maneran-tany voasambotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Desambra 2010 6:49 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, Français, 한국어, Deutsch, বাংলা, Nederlands, македонски, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Nanoratra ny Reporters sans Frontières (RSF) fa ilay mpitoraka blaogy kely taona indrindra maneran-tany antsoina hoe Navid Mohebbi 18 taona , dia eo an-dàlam-pitsarana ary efa naiditra am-ponja talohan'ny fitsarana ireo mpanongam-panjakana tany amin'ny faritra avaratry ny tanànan'i Amol. Tsy nahazo alàlana hanatrika ny fitsarana ny mpisolovava azy nanomboka ny 14 novambra. Raha ny filazan'i RSF, dia voaheloka amin'ny “asa manohitra ny fiandrianam-pirenena i Mohebbi ary “nanompa ny mpanorina ny fitondran'ny Repoblika Islamika sy ny mpitondra ankehitriny (…) tamin'ny alalan'ny firaisana tsikombakomba tamin'ny fampielezam-baovao vahiny.”
Nanambara ny Change for Equality – Fiovana ho amin'ny fitoviana, vohikala iray miaro ny zon'ny vehivavy fa mihoatra ny 250 ny mpitoraka blaogy, vehivavy sy ny olon-tsotra mafana fo mpiaro ny zo mahaolona no nanao fanambarana izay mitaky ny famotsorana an'i Navid Mohebbi tsy misy hatak'andro sy tsy misy fepetra .
Amin'ny maha-mpitoraka blaogy tanora azy, dia mizara ny tantaram-piainany sy ny heviny i Navid ao anatin'ny blaoginy. Nanoratra mikasika ny fanaovany fanatanjahantena, ny fandehanany any am-pianarana ary ny fandidiana kely natao teo amin'ny orony izy tamin'ny taona 2009. “Somary mivilana ilay izy, nefa mety afaka amboarina ho tsaratsara kokoa.” Nanoratra i Navid fa nianatra mafy izy sy ireo namany tamin'ny fanadinana fifaninanana nidirana teny amin'ny anjerimanontolo ary mamaky boky momba ny fahaiza-miaina eo anivon'ny fiaraha-monina, demokrasia (fitantanana entim-bahoaka) ary ny The Second Sex nosoratan'i Simone de Beauvoir izy ireo.
Voaray soa aman-tsara tao amin'ny anjerimanontolon'i Azad tao Tehran izy mba hianatra momba ny siansa politika.
Voatana ao amin'ny fonjan'ny tanànan'i Sari izy ankehitriny .
Nanoratra [fa] tao amin'ny blaoginy i Navid tamin'ny volana Martsa taona 2009:
“…niantso ny raiko ny sampam-pitsikilovana tao Amol mba handrahona ahy. Tsy ara-dalàna ireo antso ireo. Natao hiaro ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana any amin'ny firenena rehetra nefa eto dia ny mifanohitra amin'izany no ataon'izy ireo.
Nanoratra tao anatin'ny lahatsoratra iray tamin'ny ririnina farany teo, i Navid fa nosamborina tsy amin'antony izy teny an-dàlana. Navotsotra izy ora vitsivitsy taorian'izay noho izy nanome ny adiresiny imailaka sy ny soratra miafina ahafahana miditra ao anatin'ny blaoginy. Nahazo baiko izy hiseho any amin'ny polisy ho hadihadiana isaky ny mahazo taratasy fiantsoana.
Nanoratra [fa] i Navid:
Ny lalàna mihatra dia izay nosafidian'ny mpanadina anao ihany. Miankina bebe kokoa amin'ny baiko omen'ny Ministeran'ny fandaminana ny atitany ny fanapahan-kevitra farany raisin'ny fitsarana nohon'ny rafitra eo amin'ny lalàn'ny fitsaran'ny firenena… Namonjy ny fodiako aho avy eo ary nanontany tena, hoe rahoviana ihany re vao hanova ny fomba amam-panaony izy ireo e?.
Mampalaelo anefa fa mbola ho ela vao hahazo valim-panontaniana i Navid.
Efa manan-tantara lava be i Iran eo amin'ny fanenjehana mpitoraka blaogy sy eo amin'ny fanamelohana azy ireo an-tranomaizina mandritry ny taona maromaro – ary indrindra indrindra eo amin'ny fikaravasiana azy ireo.
Mamakia bebe kokoa ao amin'ny takelaka momba an'i Iran ao amin'ny “Ireo feo voarahona (Threatened Voices)“.
23 Desambra 2010, 11:15